Duct Tape Series Factory - Mpanamboatra andian-tsarimihetsika China Duct Tape, mpamatsy
Tape duct vita pirinty
Kasety miorina amin'ny lamba multicolor multifunctional
Ny lambam-pandriana dia mifono kofehin'ny viscosity avo na lakaoly mahamay, manana hery matanjaka peeling, tanjaka am-pahefana, fanoherana menaka, fanoherana ny fahanterana, fanoherana ny hafanana, famonoana rano ary fanoherana ny harafesina. Izy io dia kasety avo lenta miaraka amin'ny adhesion somary lehibe.
Ny lamba vita amin'ny lamba dia ampiasaina amin'ny famehezana ny baoritra, ny zaitra amin'ny karipetra, ny fametahana adidy mavesatra, ny fonosana tsy tantera-drano, sns. Ampiasaina amin'ny toerana toy ny taxi-be fiara, chassis, efi-trano sns, izay misy fepetra tsy misy rano kokoa. Mora ny manodina famonoana.